Xmas - Christmas, World Church of God Switzerland (WKG)
Haddaba, walaalayaalow, walaalaha quduuska ah oo ka qayb gala yeedhniinta jannadow, u fiirsada rasuulka iyo wadaadka sare oo aan qiranno, Ciise Masiix (Cibraaniyada 3: 1). Dadka badankood waxay aqbalaan in Kirismasku uu noqday meel buuq badan, oo ganacsi ah - in kasta oo Ciise caadiyan gabi ahaanba la ilaaway. Adkeynta waxaa la saaraa cuntada, khamriga, hadiyadaha iyo dabaaldegyada; laakiin maxaa loo dabaaldegaa? Masiixiyiin ahaan, waa inaan ka fikirno sababta Ilaah wiilkiisa ugu soo diray dhulka.
Kirismasku waxay astaan ​​u tahay jacaylka Ilaah u qabo dadka, sida aan ka akhrino Yooxanaa 3:16. "Maxaa yeelay, Ilaah dunidan wuu jeclaa, sidaa aawadeed ayuu u dhashay wiilkiisa keliya, sidaa darteed qof kasta oo isaga rumaystaa ma lumin doono, laakiin wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah". Ilaah wuxuu inaga doonayaa inaan ku raaxeysto go'aankii uu Wiilkiisa ugu diray Dunidan dembiga leh. Waxay ku bilaabantay cunug ku jiifa meel deggan oo xasilloon.
Soo qaadashada xiisaha badan ee Kirismasku waa soo gaabintii na noqotay tan maanta ina haysata - «Xmas». Masiixu waa laga saaray ereyga "Christmas"! Qaarkood waxay caddeeyaan tan iyagoo leh X wuxuu taagan yahay iskutallaabta. Haddii tani run tahay, way furnaaneysaa haddii kuwa adeegsanaya ereygu fahmaan sharraxaadda.
Waa inaan hubinaa markaan u dabaaldegno dhalashada Badbaadiyeheenna iyo saaxiibbadeenna aan eegno: «Waxaan dooneynaa inaan eegno Ciise, hormuudka iyo kaamilnimada iimaanka - maxaa yeelay Ciise wuxuu ogaa farxadda isaga sugeysa , wuxuu ku dhintay iskutallaabta iyo ceebta la timid, oo isagu wuxuu hadda ku fadhiyaa carshigii jannada xagga midigta ee Ilaah (Cibraaniyada 12:2).
Markaad furanaysid hadiyadooda Kirismaska, xusuusnow waxa Rasuul Yacquub ku qoray cutubka 1:17: «Hadiyadaha wanaagsan iyo hadiyado kaamil ah kaliya ayaa ka soo baxa xagga sare: Waxay ka yimaaddeen abuuraha xiddigaha, oo aan is beddelayn iyo cidda ay la yihiin ma jiro wax isbeddel ah oo ka soo baxa iftiinka iyo mugdiga ». Ciise wuxuu ahaa hadhaagii Kirismas ugu weyn, ma ahayn Xmas (Kirismas).
Waad ku mahadsan tahay, aabbe weyn oo cajiib leh, inaad u dirtay wiilkaaga qaaliga ah sidii ilmo yar - kaasoo khibrad u leh nolosha oo dhan. Eebbe naga caawi inaan eegno Masiixa oo ah udub dhexaadka waqtigan farxadda leh. Aamiin.